Sloty casino yase Ningizimu Afrika |20-yama spins wamahhala webhoasni angadingi dephozithi
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-sloty casino
Isibuyekezo se-Sloty Casino
Isofthiwe:Microgaming, NetEnt, Play n GO, NextGen, Yggdrasil
Ibhonasi Lokukwamukela:100% Ize ifike R3,300 ne 300 ama-spins
Abadlali abavela eNingizimu Afrika banezindawo ezimbalwa uma kukhulunywa ngamakhasino e-inthanethi, kodwa azikho izindawo eziningi ezingcono kune-Sloty Casino. I-Sloty Casino inamaphromoshini amahle atholakalayo futhi ibhonasi yayo yokukwamukela iyinto ehehayo. Ikhasino isanda kusungulwa ngo-2017 futhi iphethwe yinkampane ese-Malta, i-Genesis Global Ltd, enelayisense esemthethweni ye-Malta Gaming Authority, ye-UK Gambling Commission neye-Curacao eGaming
Imidlalo Engcono Kakhulu Yekhasino neSoftware
I-Sloty casino isebenza ngesofthiwe yabanye babahlinzeki besofthiwe yekhasino abahamba phambili embonini. Uhlu lwabahlinzeki lufaka phakathi i-NetEnt, i-Evolution Gaming, i-Play’n Go, NYX Interactive, Microgaming ne-Quickspin. Iqoqo lemidlalo e-Sloty casino alilikhulu ngenani lemidlalo kuphela, kepha kunokwehluka okukhulu phakathi kwemidlalo ngenxa yokuthi inabahlinzeki besofthiwe abahlukahlukene lapho ethola khona le midlalo.
Ngesikhathi sokubhala, ikhasino yedeskithophu inemidlalo engaphezu kwengu-390 futhi ikhasino yeselula nayo ineqoqo elikhulu lemidlalo engaphezu kwengu-230. Imidlalo emisha ifakwa njalo, abadlali abasoze bazizwe benesithukuthezi noma sengathi badlala imidlalo efanayo kaninginingi.
Maqondana nezinhlobo zemidlalo etholakalayo, i-Sloty casino ine-poker yevidiyo, imidlalo ye-roulette, imidlalo ye-blackjack, imidlalo ye-poker, ama-scratch card, ama-slot nama-slot evidiyo, neminye imidlalo yasetafuleni yekhompyutha neyeselula.
Sloty Mobile Casino – Dlala Noma Kuphi, Noma Kunini eseluleni yakho!
Maqondana nekhasino yeselula, siyajabula ukukwazisa ukuthi i-Sloty Casino iyasekela wonke amadivayisi amakhulu e-smartphone kanye nama-tablet. Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa idivayisi ye-Android, ye-iOS noma iselula ye-Windows, manje usungasebenzisa i-smartphone yakho ukungena ngemvume nokudlala e-Sloty Casino kusuka noma kuphi nganoma yisiphi isikhathi.
I-Sloty Mobile Casino Isekela amaselula namadivayisi alandelayo:
I- Sloty Casino. isekela wonke ama-iPhones, ama-iPads, amaselula e-Android nama-tablet afana nama-Samsung Galaxy, kanye namaselula nama-tablet e-Windows. Vele uqiniseke ukuthi usebenzisa i-OS engendala kudivayisi yakho yeselula bese uqala ukuyisebenzisa ikhasino.
Konke okudingayo yi-inthanethi esebenza kahle. Ngenkathi udlala ekhasino yeselula, awudingi ukudawuniloda noma iyiphi i-app ukudlala. Kumele nje uvule isiphequluli sakho se-inthanethi uye kuwebhusayithi ye-Sloty Casino futhi iwebhusayithi izobona ngokuzenzakalela ukuthi usebenzisa idivayisi ephathekayo bese ivula ikhasino yeselula. Ikhasino yeselula inemidlalo eminingi ongakhethe kuyo. Kunemidlalo engu-230 yeselula ngesikhathi sokubhala futhi le nombolo ihlala inyuka njalo.
I-Sloty casino inenethiwekhi enhle kakhulu yosizo lwamakhasimende. Okubaluleke kakhulu, kulula ukufinyelela kunethiwekhi ngenxa yesici sengxoxo ebukhoma lapho ungachofoza khona ukuxoxa bese kuvela isisebenzi esisiza amakhasimende esizokusiza ngezinto ezikukhathazayo, imibuzo nezinkinga zakho. Kuphinde kube nosizo lwe-imeyili, ungathumela i-imeyili [email protected] futhi bazokuphendula ngendlela efika ngesikhathi esifanele newusizo. Ngaphezu kwalokho, kukhona nenombolo yocingo yamahhala yomhlaba jikelele lapho ungabafinyelela khona.
Kepha, ungase ungadingi ukuxhumana neqembu lokusiza amakhasimende e-Sloty ngenxa yesigaba sabo se-FAQ esibanzi. Isigaba se-FAQ sihlelwe kahle, okwenza kube lula kuwe ukuthola isixazululo sanoma iyiphi inkinga engaba khona noma ukukhathazeka ongaba nakho.
I-Sloty Casino. yikhasino enhle kubadlali baseNingizimu Afrika. Le khasino yamukela amaRandi aseNingizimu Afrika, ineqoqo lemidlalo elimangazayo elibandakanya zonke izinhlobo zemidlalo yekhasino yekhompyutha neyeselula, inenethiwekhi yosizo lamakhasimende enokwethenjelwa futhi elula ukufinyelela kuyo, kanye nohlelo lwabadlali abathembekile futhi iyawina emabhukwini ethu.
Izinhlobo Zemidlalo: Imidlalo ye-Roulette, Ama-slot Evidiyo, Imidlalo ye-Jackpot, Ikhasino Ebukhoma, Imidlalo Yasetafuleni, Ama-Slot Akudala, Ama-Scratch Card, neminye imidlalo enjenge-Triple Chance Hilo, njll.
Izindlela Zokudiphozitha: Ikhadi Lesikweleti le-Visa , Ikhadi le-Debit le-Visa, Ikhadi Lesikweleti le-Mastercard, Ikhadi le-Debit le-Maestro, i-entropay (prepaid virtual card), i-paysafecard (e-voucher), Skrill, Neteller,i- EcoPayz, EasyEFT,i-Neteller, kanye Bank Transfers.
Isungulwe: 2017 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: 00356 27781453
Umphathi ngu: Genesis Global Ltd I-imeyili : [email protected]
Ilayisense ngeyase: Curacao Ingxoxo Ebukhoma: Yebo
Sloty Casino Amaphromoshini Okukwamukela
Ibhonasi Yediphozithi Engekho: Ama-Spin Amahhala angu-20
Ize ifike ku-R22, 500 ibhonasi kumadiphozithi angu-4 okuqala:
Ibhonasi elinganayo ka-100% kudiphozithi yokuqala ize ifike ku-R4,500 kanye nama-spin amahhala angu-300 akhishwa engu-30 ngosuku izinsuku eziyishumi zilandelana ngemuva kokwenza idiphozithi yakho yokuqala.
Ibhonasi elinganayo ka-50% kudiphozithi yesibili ize ifike ku-6000. Sebenzisa ikhodi yebhonasi: WSLOTY2
Ibhonasi elinganayo ka-25% kudiphozithi yesithathu ize ifike ku-R6500. Sebenzisa ikhodi yebhonasi: WSLOTY3
Ibhonasi elinganayo ka-25% kudiphozithi yesibili ize ifike ku-R6500. Sebenzisa ikhodi yebhonasi: WSLOTY4
Ukushesha Ukukhipha Imali: Yebo
Ikilabhu Yabadlali Abathembekile: Yebo, ifaka phakathi amaphromoshini e-VIP, amabhonasi akhethekile, ama-spin amahhala kanye namathikithi ebhanoyi okuya ezindaweni zamaholide emhlabeni wonke
Imidlalo Yabadlali Abaningi: Yebo, imidlalo ye-Blackjack Yabadlali Abaningi iyatholakala
Happy Hour Tuesdays: Thatha ama-spin amahhala angu-10 ngemuva kokudiphozitha bese udlale u-R300 ngoLwesibili phakathi kuka-4om no-6pm GMT.
Umdlalo weSonto: Njalo ngoMsombuluko thola ibhonasi ka-25% yokudiphozitha kabusha ibhonasi ize ifike ku-R1,500 kanye nama-spin amahhala angu-10.
Uhlelo lwe-VIP- Izinzuzo ezahlukahlukene ngaphansi kwale kwephromoshini zibandakanya-
Ukukhipha imali ngokushesha
Amaphromoshini akhethekile njengama-spin amahhala namabhonasi
Umphathi we-akhawunti yakho, amaphakheji eholide ahlukile nokunye okuningi.